Repoblika Dôminikana - Wikipedia
Sainan' ny Repoblika Dôminikana
Ny Repoblika Dôminikana eo anivon' izao tontolo izao
Ny Repoblika Dôminikana dia firenana ao Amerika Afovoany ao amin' ireo nosy Antilia sady manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika sy ao amin' ny Ranomasina Karaîba. I Santo Domingo no renivohiny, ary mirefy 48 400 km² ny velaran-taniny. Nisy mponina miisa 10 499 707 tao tamin' ny taona 2018. Atao hoe República Dominicana izy amin' ny teny espaniôla.
Ao amin' ny tapany andrefana amin' ny nosy Haity no misy ny Repoblika Dôminikana miampy an' ireo nosy manodidina, ka isan' izany ny nosy Beata sy ny nosy Saona. Ny ampahany sisa amin' ny nosy Haitỳ no misy ny Repoblikan' i Haitỳ. Firenena be tendrombohitra ny Repoblika Dôminikana. Be velarana ihany ny tany lonaka. Rakotra ala ny 45 %n' ilay firenena tamin' ny taona 1970 nefa nihena ho 28 % izany ankehitriny.
Sarin-tanin' ny Repoblika Dôminikana
Miompana amin' ny fambolena ny toekaren' ny Repoblika Dôminikana, ka ny volena indrindra amin' izany dia ny fary, ny kafe, ny kakaô, ny paraky, ny vary). Misy ihany koa ny fitrandrahana harena an-kibon' ny tany toy ny volamena sy ny nikela. Trandrahana ihany koa ny hazo ao an' ala.
Ny ankamaroan' ny mponina dia Katôlika. Tamin' ny taona 1844 no nanambaràna ny fahaleovan-tenan' ny Repoblika Dôminikana. Ny fiteny espaniôla no fiteny ôfisialin' ny Repoblika Dôminikana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblika_Dôminikana&oldid=1041156"
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 11:49 ity pejy ity.